ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင် ASEAN Day 2019 အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင် ASEAN Day 2019 အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း
(၈-၈-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ ဒါကာမြို့)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ သံရုံးများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ASEAN-Dhaka Committee (ADC)အနေဖြင့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့၊ ထိုင်းနိုင်ငံသံရုံး၌ ၈-၈-၂၀၁၉ ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ ဒါကာမြို့မှ သံအမတ်ကြီး ဦးလွင်ဦးနှင့်ဇနီး၊ သံရုံးဒုတိယအကြီးအကဲ၊ မြန်မာစစ်သံမှူးနှင့်ဇနီး၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် မိသားစုဝင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို အာဆီယံ အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် အာဆီယံ အစားအစာပွဲတော်အဖြစ် အစီအစဉ် (၂)ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ အဓိကဧည့်သည်တော်အဖြစ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စက်မှုဝန်ကြီး H.E. Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun ၊ ဒါကာမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့်ဇနီးများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အာဆီယံနိုင်ငံအသီးသီး၏ ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း (၁၅၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အလံတင် အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ ရှေးဦးစွာ အာဆီယံအလံကို အင်ဒိုနီးရှား စစ်သံမှူး Colonel Mardikan ကလွှင့်တင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အာဆီယံဒါကာကော်မတီ၏ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ စင်ကာပူကောင်စစ်ဝန် Hon. Mr. William Chik ၊ အခမ်းအနားကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသူ ထိုင်းသံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Arunung Phothong Humphreys နှင့် အဓိကဧည့်သည်တော်ဖြစ်သူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စက်မှုဝန်ကြီး H.E. Mr. Nurul Majid Mahmud Humayun တို့က အသီးသီးမိန့်ခွန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အလံတင် အခမ်းအနားပြီးနောက် တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များကို ဒါကာမြို့ အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံး (၈) နိုင်ငံဖြစ်သည့် ဘရူနိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်းနှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ ရိုးရာအစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ရာ မြန်မာသံရုံး၊ ဒါကာမြို့မှ မြန်မာရိုးရာ အစားအစာများဖြစ်သော အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲနှင့် သာကူပြင် တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။